Dirir ka Jirta Xafiiska Dibadjoogta – Rasaasa News
Dirir ka Jirta Xafiiska Dibadjoogta
Jijiga, May 20, 2014 – Xafiiska dibadjoogta degaanka Somalida oo dibnaha isgashaday, ka dib kolkii lagu heshiin waayey hanaanka loo maamulayo lacagaha soo gala xafiiska.
Xafiiska dibadjoogta oo ah xafiiska ugu miisaaniyada badan xafiisyada degaanka, ayaa qaabila bil walba dad badan oo ka imanay dibada, kuwaas oo loo sheegay in la siin doono dhul iyo dhaqaale.
Xafiiska dibadjoogta oo laamo ku leh Addis Ababa iyo Jijiga, ayay u kiraysan yihiin Hudheelada ugu qaalisan Addis Ababa iyo Jijiga. Waxaa kale oo xafiiska u kiraysan gaadiidka raaxada ee loo yaqaan Land Cruisers, oo maalin walba isga goosha Addis Abab iyo Jijiga.
Tigidhada, jiifka iyo cuntada lagu bixiyo dadka dibada looga yeedho, ayaa waxay noqotay mid xad dhaaf ah. Waxaana ay ku keentay mashaariicda Cara Kaawada ah ee laga wado degaanka hankaag.
Khilaafka u dhaxeeya masuuliyiinta dawlada degaanka iyo masuuliyiinta xafiiska dibadjoogta, ayaa ku salaysan dad laga kexeeyay dibada oo loo balan qaaday in la siin doono dhul iyo dhaqaale. Waxaa kale oo la isku afgaran la yahay sida loo qaybsanayo lacagta laga helo dibadjoogta aan u dhalan degaanka.
Xaalada khilaaf ee ka dhaxaysa masuuliyiinta xafiiska dibadjoogta iyo masuuliyiinta degaanka ayaa cirka isku sii tolaysa, waxana laga yaabaa in shaqada laga caydhiyo masuuliyiinta ugu saraysa xafiiska dibadjoogta.
Labo Qarax oo ka Dhaceyn Nairobi
Ogaden iyo Oromo: oo Heshiis Hordhac ah Gaadhay